Dokotera Joseph Ramiandrisoa « Nidina ny fari-piainan’ny olona, dia nalaina nifidy izy ireo »
Niaraha-nahita fa nihena ho 25% ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy tonga nifidy, ny 27 novambra teo.
Na dia teo aza ireo karazana kiana samihafa toy ny tsy fahatomombanan’ny lisi-pifidianana, ny fanatovanana ny anaran’ny mpifidy, ny tsy fahamatorana tamin’ny fikarakarana iny fifidianana ben’ny tanàna iny, dia nilaza ny dokotera Joseph Ramiandrisoa sady ministra teo aloha, fa nalaina nifidy ny mpifidy, noho ireto antony ireto. Nambarany, fa noho ny fari-piainan’ny olona nidina ambany no nampalaina ireo mpifidy. Faharoa, fototry ny olana tamin’ny fikirakirana ny fifidianana rehetra niseho teto iny koa ny vaomiera misahana ny fifidianana na ny Ceni, hoy izy, fa tsy dia leo politika loatra ny mpifidy. Fahatelo, eo koa ny fanaovana hosoka sy ny halatra maro samy hafa, ka antony tsy nampazoto ny mpifidy tonga nifidy intsony izany, hoy ny fanazavany. Tokony hisy ny fanorenana ifotony mikasika sy ny momba ny fifidianana, indrindra fa ny lisitra, mba tsy hiverenan’ny olana amin’ny fifidianana manaraka eo intsony, hoy hatrany ity dokotera ity.